Puntlandnews.net (Hargaysa)-Magaalada London ee carriga Ingiriiska ayaa waxaa lagu qabtay shirweyne lagu soo bandhigayey shidaalka kujira guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan badda Soomaaliya ay leedahay.
Shirkaasi waxaa lagu casuumey madax ka socota dowladda federalka ah ee Soomaaliya, shirkado daneeya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan shidaalka iyo dalal kala duwan ee ay saaxiibo yihiin dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Mudadii uu socdey shirku waxaa lagu soo bandhigay nooca shidaal ee kujira biyaha Soomaaliya, meelaha ugu badan ee uu kujiro kadib sahano kala duwan ee lagu sameeyey dalka iyo siyaabaha looga faa’iidaysan karo.
Daneeyayaal kala duwan ayaa soo bandhigay dhaqaale badan oo ay ku doonayaan inay kula soo baxaan shidaalka kujira dalka, waxaana dhinacyada mucaaradku aad ugu dhaliileen madaxda Soomaaliya inay shidaalkii dalka ka iibinayaan shirkado ajaaniib ah.
Maamulka Somaliland ayaa kamid ah dhinacyada aadka uga walaacsan shirkaasi isagoo ka walwal qaba in shidaalka kujira xeebaha hoosyimaada maamulkaasi lagu wareejiyo shirkado ajaaniib ah iyagoo aan waxba laga tala gelin.
Ilo xogagaal ah ayaa u xaqiijiyey Puntlanndews in madaxtooyada Somaliland ay gudbisey warqad ay ku sheegayso in xeebaha hoosyimaada maamulkaasi aysan cidna ku matali karin dowladda Federalka ah ee Soomaaliya.